Dowladda Soomaaliya oo furtay Aqoon isweydaarsi looga hadlaayo kheyraadka dalka – Radio Muqdisho
Kulankan aqoon iswaydaarsiga ayaa la xariir sidii looga hortagi karo khilaafka ka dhasha kheyraadka dalka iyo sida loo qeybsan karo kheyraadka dalka maadaama uu dalkeenu qatay nimaadka Federaalka isla markaana ay soo qaban qaabisay hay’adda SIRC ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Furitaanka aqoon isweydaarsigan ayaa waxaana ka qayb galay siihayaha Wasiirka wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka xukuumada Soomaaliya ku simaha Wasiirka Beeraha gudoomiyaha guddiga Maaliyadda iyo Ganacsiga Barlamaanka Soomaaliya.
Aqoon is waydaarsiga ayaa sida uu qorshuhu yahay waxaa uu socon doono mudo Sadex cisho ah ayaa loo qabtay in badan 60 qof oo isku jira Ragg iyo Dumar kuwaasi ka kala yimid qaar ka mid ah gobolada dalka.
Mudane Cabdulahi Jaamac Xuseen gudoomiyaha guddiga Maaliyadda iyo Ganacsiga Barlamaanka Federalka Soomaaliya oo kulanka ka hadalay ayaa sheegay in dalka Soomaaliya uu xiligani qaatay nidaamka Federalka oo ku cusub bulshada Soomaaliya,isla markaana ay sameysmeen maamul goboleedyo loona bahanyahay in Dowlada Soomaaliya ay samayso sharci qeexayada sida loo qeybsan karo kheyraadka dalka Soomaaliya iyo cida xaqa u leh in gasho heshiisyada ku aadan kheyraadka.
Siihayaha Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federalka Soomaaliya mudane Cabdulaahi Godax Barre oo furay aqoon isweydaarsiga ayaa ka hadlay halka ay marayaan dhismo maamulada dalka isagoo sheegay in marka dalka oo idil laga hirgaliyo maamulo dhamaystiran la samayn doono gudi badala gudiga KMG ah ee xaduudaha iyo hadda shaqeeya .